RW Rooble oo u ambabaxaya safar dibadda ah | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo u ambabaxaya safar dibadda ah
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ku wajahan dalka Sacuudiga, sida ay xaqiijinayaan ilo muhiim ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa la filayaa inuu dhawaan u ambabaxo, waddanka Boqortooyada Sacuudi Caribiya, maalmo kadib markii lagu wareejiyay hoggaanka doorashoyinka iyo amniga dalka.
Sida ay xaqiijinayaan ilo xol ogaal ah, safarka RW Rooble ayay u jeedadiisu tahay, gudashada Cumrada sanadkaan, wuxuuna doonaya inuu baxo ka hor inta aan wadahaddala rasmiga ah ee doorashooyinku billaaban.
Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa laga filayaa hir-galinta doorasho loo dhan yahay oo dalka ka qabsoonta sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana hor yaalla xallinta qodobo waaweyn oo Farmaajo iska hor wareejin waayay.
Xal u helidda ciidamada gadoodsan ee ka hor yimid muddo kordhinta, heshiiska doorashooynka, raadinta dhaqaalaha doorashada, aminga dalka iyo doorashooyinka, iyo caqabado waaweyn ayaa looga baahan yahay Rooble inuu wajaho.
Dalka Sacuudiga ayaa dib u furay duulimaadyada caalamiga ah, kadib markii uu waddanku xakameeyay faafidda cudurka safmark ah ee COVID-19.
Xiriirka diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa aad u hooseysay tan iyo markii uu yimid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana taas loo aaneeyaa calaaqaadka uu la leeyahay dalka Qatar.